‘आधुनिक हुनु राम्रो भए पनि आधुनिकताकै नाममा आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सनु जातीय संकट’ – खुश्बु पाख्रिन • Janaboli
‘आधुनिक हुनु राम्रो भए पनि आधुनिकताकै नाममा आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सनु जातीय संकट’ – खुश्बु पाख्रिन
कुशल गोले, दार्जिलिङ/ आधुनिक हुनु राम्रो हो तर आधुनिक भएर आफ्नो अस्तित्व बिर्सनुलाई जातीय संकटको कुरा मान्ने खुश्बु भारतीय नेपाली समाजकी एकजना होनहार युवा हुन् । हालमा सोसियल मिडियामा चर्चित बन्दै गएकी दार्जीलिङकी युवा कवि औ कानुन विभागकी अन्तिम वर्षकी छात्रा अनि २०१६ धमारी कविता विजेता साथै अन्तर्राष्ट्रिय कविता महोत्सव २०१७ सम्म भाग लिइसकेकी खुश्बु पाख्रिनसँग कुशलगोलेले लिएको छोटो अन्तर्वार्ता।
१) प्रश्न-हालमा तपाईं के गर्नु हुँदैछ?
खुश्बु-हालमा म उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गर्दैछु । त्यसका साथै इन्टर्नसिप पनि गर्दैछु। त्यहीँ बीचमा केहि समय निकालेर एउटा कविता संग्रह पनि निकाल्ने तयारीमा छु।
२) प्रश्न-हजुर २०१६ धमारी कविता विजेता हुनुहुँदो रहेछ।धमारी विजेता भएपछि हजुरलाई कस्तो अनुभव भयो?
खुश्बु- धमारी मेरा लागी एउटा सबैभन्दा महुत्वपुर्ण इभेण्ट हो जसले मेरो जीवनमा एउटा नयाँ परिवर्तन ल्यायो । म सानैदेखि कविताहरु पढ्न अनि वाचन गर्न मन पराँउथे र आफ्ना डायरीमा जानी नजानी मिलाएर कविताहरु लेख्ने गर्थे र आफै संसोधन पनि गर्थे। र धमारी २०१६ आयोजित हुन्छ भन्ने कुरा मलाई मेरो दिदीले सुनाउँदा मलाई पनि मेरो कविता अरूका अगाडि प्रस्तुत गर्ने मन भयो र हाम्रो बहिनीको कलेजका नेपाली प्रोफेसर बासु थापा पुलामीबाट धमारी के हो ? अनि कस्तो हो भन्ने जानकारी प्राप्त गरेँ र सबै रेजिस्ट्रेसन भइसकेर म त्यहाँ भाग लिन पुगे। त्यहाँ राम्रो गायक ,कवि, कवियत्री ठाउँ-ठाँउबाट उपस्थित भएका थिए। अन्तिममा जब धमारी बिजेताको नाम घोषणा गरियो, तब म अचम्म परे । म भन्दा पनि खुशी मेरो साथिहरू थिए जसले मलाई धमारी कार्यक्रमसम्म आउन सहयोग पुऱ्याएका थिए । धमारि घोषित भएपछि मैले कविता मात्र होइन तर साहित्य के हो भन्ने कुरा थाहा पाए । धमारी एउटा पुरस्कार मात्र होइन तर यसले मेरो जीवनमा एउटा नयाँ उत्साह दियो नयाँ आशा दियो। कानूनको पढाईदेखि अलग धमारिले मलाई एउटा नयाँ परिचय दियो ।
३)प्रश्न-हजुरलाई कविता लेखनप्रति कसरी रूचि हुन गयो?
खुश्बु- मैले जानेर बुझेर कविता लेखेको होइन ,म विद्यालय पढ्दा देखिनै आफ्नु मनका कुराहरू डायरीमा लेख्ने गर्थे र यसरी ती शब्द हरूमिलेर ससानो कविता बनिन्थ्यो।
khushbu Pakhrin www.janabolo.com
४)प्रश्न- साहित्यप्रति हजुरको के अवधारणा छ?
खुश्बु-साहित्य मानव जीवन परिवर्तका निम्ति अनमोल कुरा हो। यसलाई हामीले सुरक्षित राख्नु पर्छ। कविता, कथा, उपन्यास आदिको निरन्तर सृजनाद्वारा नेपाली साहित्यको अझै प्रगति गर्नुपर्छ। साहित्य हाम्रो परिचय र चिनारीको मूल खम्बा हो र समयको विकास अनि परिवर्तनसँगै साहित्य लेखन अनि प्रस्तुतिकरणको परिपाटी पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ जसले गर्दा युवा जमातमा यो अझ लोकप्रिय हुन जाओस् ।
५)प्रश्न-कानुन विभागकी छात्रा हुनुहुँदो रहेछ।आफ्नो पढाई अनि साहित्यप्रतिको योगदानको समयलाई कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ ?
खुश्बु-कविता लेख्नका निम्ति समय मिलाउन पर्दैन। किनभने कविता म तब लेख्छु जब मेरो मनमा शब्द अनि भावनाले रूप लिन्छ र यो कहिले पनि हुन सक्छ यसको मैले समय तोक्नु सक्दिन।
६)प्रश्न-आफ्नो समाज अनि जातिप्रति हजुर के सोंच्नु हुन्छ?
खुश्बु- आफ्नो जातिको मलाई माया लाग्छ अनि आउने दिनहरूमा मैले सकेभर जानेभर आफ्नो जातिलाई सहयोग पुऱ्याउन चाहान्छु र हाम्रो समाजलाई चाहिँ परिवर्तन र प्रगतिको खाँचो छ र सोचाँइमा पनि फरक ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो बिचार छ।
७)प्रश्न-अन्तिम प्रश्न हजुरलाई- आउँदै गरेको नयाँ जेनेरेसनलाई हजुर के सुझाव दिन चाहानु हुन्छ?
खुश्बु-समय सँगसँगै अगाडि बढनु सक्नु पर्छ। संघर्ष बिना केहि सम्भव छैन। त्यसैले हरेक कुरामा संघर्ष गरेर अगाडी बढ्ने सुझाव दिन चाहान्छु। आधुनिक हुनु राम्रो कुरा हो तर आधुनिक भएर आफ्नो अस्तित्व बिर्सनु चाहिँ जातिय संकटको कुरा म मान्दछु। त्यसैले आफ्नो समाज अनि संस्कृतिको शिर झुक्न नदिइ अगाडि बढनु नै हाम्रो जेनेरेसनको मुख्य कर्तव्य मान्दछु। धन्यवाद ।।